स्थानीय तहका एकाइ थप गर्ने सरकारको निर्णय वैधानिकता » खबरहरुको एउटै केन्द्र
स्थानीय तहका एकाइ थप गर्ने सरकारको निर्णय वैधानिकता
बुधबार, चैत्र १६, २०७३ ०६:२६ मा प्रकाशित !
१६ चैत,काठमाडौंँ। स्थानीय तहका एकाइ थप गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन सर्वाेच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । सर्वाेच्चको यो निर्णयसँगै सरकारको निर्णयले वैधानिकता पाएको छ ।
न्यायाधीशद्वय मीरा खड्का र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले मङ्गलबार सरकारको निर्णय कार्यान्वयन रोक्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो । आयोगको कार्यादेश सरकारले तोकेअनुसार हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने इजलासको ठहर छ ।
आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा सरकारले सङ्ख्या थप गर्नु संविधान विपरीत भएको भन्दै अधिवक्ता चिरञ्जीवी रिजालले रिट दर्ता गरेको थियो ।
सरकारले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदन परिमार्जन गर्दै २५ स्थानीय तहका एकाइ थप गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
राजनीतिक रूपमा प्रतिवेदनको विरोध भएपछि सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री संयोजक रहेको अध्ययन समिति गठन भएको थियो । अध्ययन समितिको सिफारिसअनुसार सरकारले स्थानीय तहमा गाउँपाल%B
PREVIOUS POST Previous post: गाउँपालिका भित्रका २८ वडामा २८ वटै मतदानस्थल
NEXT POST Next post: नेपाल टेलिकमले सावाकटहरेमा बीटीएस टावर जडान
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते बुधबार, चैत्र १६, २०७३ ०६:२६
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस बुधबार, चैत्र १६, २०७३ ०६:२६
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण बुधबार, चैत्र १६, २०७३ ०६:२६
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी बुधबार, चैत्र १६, २०७३ ०६:२६
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? बुधबार, चैत्र १६, २०७३ ०६:२६